Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1390
Atsimo : mila hamafisina ny fitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika
Par Taratra sur 11/02/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nidina teny anivon’ny distrika ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo ny Ofisim-pirenena momba ny fanjarian-tsakafo (ONN), ny volana janoary lasa teo, nijery ifotony ny tohin’ny asa.Voaporofon’ny fanadihadiana tany an-toerana fa tokony hamafisina ny fandraisana an-tanana ny olona voan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Tafiditra amin’ny hetsika, nanomboka ny taona 2015, ny fizarana ny Plumpy Doz sy Plumpy Sup (ahitana […]
Mbola ao anatin’ny fotoana fampianarana ny mponin’Antananarivo ny kaominina miaraka amin’ny orinasa mpiara-miombon’antoka, Easy Park amin’ny fanajana ny fampiasanan ny toeram-piantsonan’ny fiara. Io no fanazavana nentin’ny tompon’andraikitra omaly nandritra ny resaka nifanaovana taminy. Ampianarina mandoa saran’ny fiantsonana ary ampianarina manara-dalàna ny olona ety am-piandohana. Raiketin’ny tompon’andraikitra anaty solosaina avokoa ny laharan’ny fiara fantatra fa nanao […]
Fetin’ny mpifankatia : hihira ny fitiavana ry Kaiamba Tena Izy
Par Taratra sur 11/02/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Maro ny tolotra amin’izao ankatoky ny fetin’ny mpifankatia izao. Manana ny mampiavaka azy koa, ka hizara izany ny tarika Kaiamba Tena Izy. Manome fotoana ireo mpankafy, etsy amin’ny Amitié Fandian Ankadindramamy (Samara taloha) izy ireo ny alin’ny zoma 12 febroary izao. Handahatra ny sanganasany mandritra io fotoana io ireo mpanakanto malaza amin’ny revy kaiamba toa […]
Rapatsalahy Paul (Idealy-Soa) : hosokafana ny mozea tsy miankina roa
Tafatsangana ny komity mpikarakara ny fankalazana ny faha-100 taon-dRapatsalahy Paul na Idealy-Soa, mpanao gazety sady mpanoratra. Anisan’ny vaovao nisongadina nandritra ny velakevitra nataon’ity komity ity niaraka tamin’ny fianakaviany, omaly, ny fampahafantarana fa hosokafana etsy Antanimena (Tranobe SBM ampitan’ny Victoria Plazza) ny Mozean’ny Haisoratra «Paul Rapatsalahy». Hirakitra ny tantaran-dRapatsalahy Paul, ny zavatra vitany, ireo olona niara-niasa taminy […]
Fampianarana teny anglisy : nohavaozina ny boky ho an’ny 2nde
Par Taratra sur 11/02/2016 Divers, NS Malagasy
Voavolavola ny boky torolalana ho an’ny mpampianatra ny teny anglisy amin’ny kilasy 2nde. Vokatry ny asa fanavaozana ny fampianarana ny teny anglisy eny amin’ny lycée no nahazoana ny vokatra tao anatin’ny 10 volana. Nitondra ny traikefany tamin’ny fanavaozana ny manampahaizana amerikanina momba ny teny angilsy, Erik Lundell. Niara-niasa amin’ny teknisianin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny mpampianatra […]
Grace Corp : hasandratra ny vokatra malagasy avo lenta
Hitondra rivo-baovao eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy ny Grace Corp, ivondronan’ny Grace Music, mpamokatra rakipeo; ny DL Visual, mpamokatra rakitsary, ny sampana momba ny informatika ary ny mpikarakara hetsika samihafa ara-javakanto. Vokatra tsara avy amin’ny teknolojia avo lenta, nokirakirain’ny teknisianina matihanina (malagasy sy vahiny), vokatra maharaka ny fenitra iraisam-pirenena afaka mifaninana amin’ny vitan’ny vahiny. Ireo […]
Par Taratra sur 11/02/2016 Economie, NS Malagasy
Lasa resabe ny fanaovana-dalana atsy Le Réunion. Tsy ahitan-teny ny tompon’andraikitra eto Madagasikara, nefa any Toamasina ny nakana ireo vatobe hanaovana ilay lalana. Nopotehina ny ala, nandavahana hatrany amin’ny 45 m. Nanao fanadihadiana lalim-paka mihitsy ny mpanao gazety atsy La Réunion, avy amin’ny Mediapart, mikasika ny fanaovan-dalana atsy La Réunion, nivoaka ny 9 febroary teo. […]
Par Taratra sur 11/02/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tonga, afakomaly eto amintsika, ireo mpianatra Capstone, mpandray vatsim-pianarana miisa17 tarihin’ny manamboninahitra amerikanina, ny amiraly Johnson. Tafiditra amin’ny fiofanana ataon’izy ireo izao fitsidihana izao hahatakarany lalindalina kokoa ny fiarovana, ny fitandroana ny filaminana, ary ny olana ara-politika atrehin’ny firenena mpiara-miombona antoka amin’i Etazonia. Hihaona sy hifanakalo hevitra amin’ny manam-pahefana miaramila sy sivily izy ireo. Anisan’izany […]
Filankevitry ny governemanta : nosokajina sy nofaritana indray ny fokontany
Anisan’ny nivoitra teo anivon’ny filankevitry ny governemanta, natao teny Mahazoarivo afakomaly, ny firafitry ny fokontany sy ny famaritana azy ary koa ny andraikiny. Misongadina amin’izany ny momba ireo fokontany eto Antananarivo Renivohitra. Eo ambany fiahian’ny distrika izy ireo ka ahitana ny sefo fokontany, ny sefo fokontany lefitra hisahana ny fitantanan-draharaham-panjakana ankapobeny sy ny filaminana ary […]
﻿﻿Faritra Boeny : namboly zana-kazo 13.000
Nosantarina tany amin’ny ala Marohogo any amin’ny kaominina Belobaka, distrika Mahajanga II, ny fambolen-kazo 2016. Nahatratra 13.000 ny zana-kazo novolena, ahitana ananambo, acacia ary kininina, tamina velaran-tany 10 ha. Sahaza ny toe-tany sy toetr’andro any an-toerana tsara ireo karazan-kazo telo ireo, sady afaka miteraka harena mampidi-bola ara-toekarena. Nambaran’ny talem-paritry ny Tontolo iainana any Mahajanga, Rtoa […]
Par Taratra sur 11/02/2016 En Bref, NS Malagasy
Ambasadaoro vaovaon’i Afrika Atsimo hiasa sy honina eto amintsika i Maud Vuyelwa Dlomo. Nanatitra ny taratasy manendry azy amin’izany toerana izany tamin’ny filoha Rajaonarimampianina eny Iavoloha ny tenany, omaly. Nandimby toerana ny ambasadaoro teo aloha, Gert Johannes Grobbler, izy io. Maherin’ny 500 ny fangatahana onitra noho ny « Raharaha 2002 sy 2009 » voarain’ny eo anivon’ny FFM, […]
Praminisitra Ravelonarivo : “Amin’ny volana jona ny fifidianam-paritra”
“Hatao any amin’ny volana jona any ho any ny fifidianana rezionaly”, hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo teny Ankorondrano, omaly, nitatitra momba ny Dinika politika niarahan’ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny governemanta malagasy. Nanatrika izany ireo minisitra izay mahazo famatsiam-bola avy amin’ny EU ny departemanta tarihiny. Mbola zakantsika ny fifidianana rezionaly ary tsy nangatahana fanampiana, raha ny […]
Andranomena Ambohimanarina : jiolahy nihanika tamboho voatifitry ny polisy
Teo am-pihanihana tamboho no voatifitry ny polisy ny jiolahy iray teny Andranomena. Nanondro ny namany ireo ka notsimponina ny namany. Avy namaky trano fanaovana “jeux vidéo” ireto efa-dahy teny Andranomena Ambohimanarina, ny alahady tokony ho tamin’ny 11 ora alina, ka nifanenjehan’ny polisy. Nitsoaka izy efa-dahy efa samy nitondra entana halatra, ka teo am-pihanihana tamboho no […]
Na eo aza ny fifaninanana… : vonona sy nametraka fanamby goavana ny Les Nouvelles
Lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany, eo amin’ny tantaran’ny Vondron-gazety Ultima Media, no notanterahina, omaly tetsy amin’ny Café de la gare, Soarano. Fotoana nanehoana ny fahavononana, ny fanamby hiatrika ny fifaninanana izay mahazo vahana tokoa eo amin’ny tontolon’ny fampahalalam-baovao ankehitriny. Nifantohan’ny fotoana manokana ny gazety Les Nouvelles. Nampahafantarina ireo vahiny nasaina (mpamaky tsotra, namana, mpandraharaha […]
Vondrona eoropeanina : tsy mahafa-po ny ezaky ny fanjakana
Toy ny Banky iraisam-pirenena ihany, tsy mahafa-po ny Vondrona eoropeanina (UE,) hatreto, ny ezaky ny fanjakana malagasy. Voakasik’izany ny sehatry ny lalana, ny tsy fisin’ny Fitsarana avo ho an’ny mpitondra (HCJ), indrindra ny tsy fanasaziana ny mpanao trafika andramena. Tafahaona, omaly, ny firenena mpikambana ao amin’ny Vondrona eoropeanina (UE), andaniny, sy ny governemanta malagasy ankilany. […]
Nihena ny vidin-tsolika : nidina latsaky ny 3.000 Ar ny litatry ny gazoala
Nihena fanindroany ny vidin-tsolika, tamin’ity taona ity. Lasa 2.810 Ar ny litatry ny gazoala raha 3.090 Ar (-280 Ar) teo aloha. Izany hoe, lasa latsaky ny 3.000 Ar. Lasa 3.460 Ar/l ny lasantsy SP 95 raha 3.550 Ar/l teo aloha (-90 Ar) ary nidina ho 2.110 Ar/l ny solitany fandrehitra raha 2.320 Ar/l (-210 Ar) […]
Tra-tehaka teo am-pivarotana rongony ny lehilahy iray, 30 taona, nahatrarana fonosan-drongony miisa 55 tany aminy. Tamin’ny fanadihadihana natao azy, nilaza izy fa tsy mahafantatra ny toerana ividianana ireo rongony ireo fa ny vadiny no mitondra vola 20.000 Ar mivoaka ny trano ka mitondra ny entana avy any. Amidy 500 Ar ny iray fonosana, 20 fonosana […]
Minisitra Stéphane Le Foll : hanampy ny oniversite GSI amin’ny fiofanana
Hanampy ny oniversite GSI ny minisitry ny Fambolena frantsay, Stéphane Le Foll, eo amin’ny fanokafana toeram-piofanana momba ny « agroalimentaire » sy « produits biologiques », izay hisokatra tsy ho ela eto amintsika, araka ny fanazavan’ny filohan’ny oniversite GSI, Andrianaivo Geromioh. Amin’ity taona ity no hanatanterahana ny fifanarahana eo amin’ny roa tonta. Efa nanalalana tany Frantsa rahateo ity filoha […]
Antalaha : fikononkononana handositra ny fonja, gadra roa voatifitra
Gadra roa voatifitry ny mpiandry fonja nandritra ny fikasana handositra, afakomaly tao amin’ny fonjaben’Antalaha. Maty tsy tra-drano ny gadra iray raha naratra teo amin’ny tongony kosa ilay namany. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, mpamangy iray no nampiditra antsy tao anaty fonja ka nanome izany tamin’ireo voafonja roa lahy. Tsikaritry ny mpiambina ny fonja […]
Ampamoakan’ny jeneraly Ramakavelo Désiré momba ny 11 febroary 1975
Par Taratra sur 11/02/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Nampitandremana fa tsy omena herinandro Ratsimandrava – Tsy nanendren-dRamanantsoa an-dRatsiraka ny resak’i Fety Michel – Nangatahin-dRatsiraka hatao “sesitany” Ratsimandrava 11 febroary 1975. 41 taona lasa izay ny nahafatesan’ny filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta, ny kolonely Ratsimandrava Richard. Hatramin’izao, tsy fantatra ny marina. Mitantara izay niainany sy fantany ny tale kabinetra miaramilany ary efa lehiben’ny birao […]
Alaotra-mangoro : 450 enseignants Fram sous contrat
Par Taratra sur 10/02/2016 Faits Divers, NS Français
Les 450 nouvelles recrues de la direction régionale de l’Education nationale (Dren) d’Alaotra-Mangoro viennent de recevoir leur contrat de travail, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Ambatondrazaka, en présence du ministre de l’Education nationale, Paul Rabary. Ces nouvelles recrues font partie de la deuxième vague d’enseignements Fram qui ont conclu leur contrat en 2014 […]
Rugby – «Gold Top 8 Mada» : hifanandrina amin’ny boaty telo ny FTM Manjakaray
Par Taratra sur 10/02/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tontosa omaly ny fisarihana ireo ekipa 8 hiatrika ny “Gold Top 8 Mada”, eo amin’ny taranja rugby. Iray vondrona ny 3FB, tompondakan’i Madagasikara sady tompondakan’Analamanga, ny Tam Anosibe sy ny Pilo Kely. Hafana vay avokoa ny fihaonana eo amin’ny fifaninanam-pirenena, taranja rugby ho an’ny sokajy D1 Elite 1, na ny “Gold Top 8 Mada”, ho […]
«Course pour la solidarité feminine» : hiara-dalana ny atletisma sy ny basikety
Par Taratra sur 10/02/2016 Divers, NS Malagasy
Hiditra amin’ny andiany fahefatra ny fifaninanana hanamarihana ny firaisankinan’ny vehivavy, izay karakarain’ny fikambanan’ireo Malagasy niatrika ny Lalao Olympika (Amao). Araka ny fampitam-baovao, hotanterahina ny alahady 20 mamrsa ho avy izao, izany ka tsy miova ny anaran’ny hetsika fa “Course pour la solidarité feminine” ihany. Hiavaka ity andiany ity, satria ankoatra ny hazakazaka efa mahazatra, hisy […]
Basikety – Coupe du Président” : nampiseho ny tanjany ny Chicago sy ny Sporting
Mitohy hatrany ny fiadiana ny « Coupe du Président », taranja basikety, ho an’ireo Zones roa, Nord sy Centre. Miditra amin’ny andiany faharoa mantsy ny hetsika, nanomboka ny 6 febroary hatramin’ny 21 febroary izao, ka ny amin’ny Zone Nord, any Antsiranana, sy Zone Centre, any Toamasina, no nanombohana ny fifanintsanana. Ho an’ny Zone Nord manokana, saika nampiseho […]
« Précédent 1 … 1 388 1 389 1 390 1 391 1 392 … 1 426 Suivant »